चीनमा फेरी कोरोना थपिएपछि सरकार लकडाउन लगाउँने निर्णय ! « Etajakhabar
चीनमा फेरी कोरोना थपिएपछि सरकार लकडाउन लगाउँने निर्णय !
प्रकाशित मिति : १५ असार २०७७, सोमबार १३:१६
एजेन्सी । चीनवाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वव्यापी भएको छ । चीनले कोरोनालाई जितेर जिवन सहज हुँदै थियो । फेरी अहिले चीनमा कोरोना थपिएपछि सरकार लकडाउन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । चीनले राजधानी सहर बेइजिङको निकट रहेको हेबेई प्रान्तमा पुन कोरोना संक्रमित फेला परेपछि सरकार लकडाउन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
सरकारले लकडाउनका क्रममा निकै कडा नियक लागू गरेको छ । जसका कारण त्यहाँ बसोवास गर्ने करिब चार लाख मानिस प्रभावित हुने भएका छन् । राजधानीमा पनि जोखिम बढ्ने भएकाले चीनले लकडाउन निकै कडा बनाउने निर्णय गरेको हो । तीन महिना सम्म कोरोनासंग जुधेको चीनमा जनजिवन सामान्य हुने प्रकृयामा थियो । विद्यालय सञ्चालन गरिएका थिए भने सार्वजनिक यातायात खुल्न थालेका थिए ।
गत वर्षको अन्तिमममा चीनवाट सुरु भएको कोरोना विश्वव्यापी फैलिएको हो । विश्वस्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको दोस्रो चरण पनि सुरु हुने र त्यो थप जोखिमपूर्ण हुने भन्दै सतर्क गराएकै बेलामा चीनमा फेरी कोरोना देखिएको हो । कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने आशंकाको कारण चिनियाँ अधिकारीहरु अहिले सतर्क भएका छन् । त्यसैले यसलाई गम्भीरताको साथमा लिइएको छ ।
चीन सरकारले सो क्षेत्रमा आइतवार देखि पुन लकडाउन घोषणा गरेको हो । केवल आवरुश्यक सेवाहरुसँग सम्बन्धित मानिसहरुलाई मात्र घरबाट बाहिर निस्किन दिइनेछ । एउटा घरवाट दिनमा एक जनामात्र आवश्यक सामान किन्न घरवाट वाहिर निस्कन पाउनेछन् । वाहिरवाट आउने मासिनलाई समुदायमै प्रवेश निषेध गरिएको छ । लकडाउन पालना नगर्नेलाई कडा सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।